I-Marlborough Sounds Haven enokubukwa okukhangayo. - I-Airbnb
I-Marlborough Sounds Haven enokubukwa okukhangayo.
Elaine Bay, Marlborough, i-New Zealand
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Kay
I-Olive Cottage itholakala enhlonhlweni encane ekugcineni kwe-Elaine Bay Road, enokubukwa okumangazayo kwe-Tawhitinui Reach. Ngemva kosuku lokudoba, ukuhamba ngezinyawo, ukugwedla, noma ukuphumula kule ndawo enokuthula, indawo yokuphumula ezungeze ichibi le-infinity. I-BBQ ukubamba kwakho endaweni ebanzi yezingodo ezungezwe izitshalo nezilwane, ngaphambi kokujabulela ukubuka inkanyezi ngaphandle kokungcoliswa kokukhanya.
Siyisizukulwane sesithathu ukuba ngabanikazi balesi sakhiwo e-Elaine Bay. Ugogo nomkhulu babehamba ngesikebhe beyobuka ingxenye; njengoba wawungekho umgwaqo ngaleso sikhathi. Manje kule ndawo kunezindlu ezimbili; I-Olive Cottage kanye ne-Pool House. Siqashisa nge-Olive Cottage, futhi kuyinhloso yethu ukuthi izivakashi zethu zisebenzise le ndawo kuphela. I-Olive Cottage ixhunywe kwi-Pool House kanye nephuli ngedekhi.
Kuzimele ngaphandle amanzi anosawoti i-infinity i-pool
4.89 · 55 okushiwo abanye
Ngaphandle kwezakhamuzi ezimbalwa ezihlala unomphela, indawo yokuhlala yase-Elaine Bay iqukethe ikakhulukazi amakhaya amaholide. Ichweba libamba ichweba lokudoba kanye ne-aquaculture. Umkhiqizo oyinhloko yimbaza enezindebe eziluhlaza. Ngenxa yokuthi i-Olive Cottage isenhlonhlweni ekupheleni komgwaqo, uzizwa uhlukanisiwe ngokuphelele, nokuwukuphela kwethrafikhi edlula olwandle.
Iyatholakala kunoma imiphi imibuzo ngefoni.